China 300×300/600×600mm Aluminiyam ikliphu kwifektri yesilingi kunye nababoneleli |Zhongming
300×300/600×600mm ikliphu yeAluminiyam kwisilingi
Isilingi yeAluminiyam yeClip (isilingi yesikwere) Jikelele kunye noMda:300*300 ,600*600mm
Ukusebenza kakuhle kokungangeni manzi, izinto ezikhanyayo, amandla aphezulu, akulula ukuguga, kulula ukuyifaka, inesandi esilungileyo sokufunxa, isandi sokugquma isandi, isibane esilula sokucoca, ukusetyenziswa kakuhle kobomi obude, akulula ukwenza i-deformation kunye ne-discoloration.
Igama Ikliphu yeAluminiyam kwiSilingi
Umbala Nayiphi na imibala ye-RAL yokhetho lwakho;
IBanga leShithi I-Aluminiyam ingxubevange AA1100, 3003, 3014, 5005, 5015, 6063 njl;
OEM / ODM Ngokwesicelo somthengi;
Isampuli yasimahla Uyilo oluqhelekileyo lunokuba yisampuli yasimahla,umthengi uhlawula imithwalo;
Iingenelo • Khusela ekukhanyeni okunamandla elangeni, nokuhambelana nokusingqongileyo;
• Ubungqina bomlilo, Anti-humidity, ukufunxa isandi;
• Ufakelo olulula, Iindleko zokulungisa eziphantsi;
• Imibala eyahlukeneyo, uyilo oluchanekileyo;
Ukutyeba 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 5.0mm, 8mm, 10mm, 20mm.Okunye ukutyeba kuyafumaneka xa uceliwe;
Cebisa ubungakanani 1220mm * 2440mm OKANYE 1000mm * 2000mm;
Unyango loMphezulu I-Anodized, powder coated okanye i-PVDF yokutshiza;
Ipateni (uyilo) Inokuthi ivalwe ngokwesampulu yakho okanye umzobo weCAD.Isenokugotywa, igotywe ngokwesicelo;
Ukupakisha Isiqwenga ngasinye ngefilimu ecacileyo, igwebu ngaphakathi,kunye nebhegi yeqamza ngamaplanga okanye ibhokisi yeCarton;
Isilingi ye-aluminium yinto ekhethekileyo, ilula kwaye ihlala ihlala njalo.Isetyenziswa ngokubanzi kwiisilingi zokuhombisa ikhaya.Ineentlobo ngeentlobo zeempawu ezibalaseleyo.Kufanelekile kwiikhikhini kunye namagumbi okuhlambela.Iyakwazi ukufezekisa imiphumo emihle yokuhlobisa kwaye inemisebenzi emininzi.Ngoko ke, yamkelwa kakuhle ngabathengi, okuyimvelaphi yesilingi ye-aluminium.
Ubundlongondlongo boshishino lwesilingi oludityanisiweyo buye lwasenza ukuba siphume kwigumbi elincinane lokuphekela kunye negumbi lokuhlambela kwaye siphuhlise iimveliso ezahlukeneyo ezilungele imisebenzi emininzi kunye nokusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo ezinje ngamagumbi okuhlala, amagumbi okulala, indawo zokungena kunye neebhalkhoni.
Izinto eziluncedo kwisilingi ye-aluminium
(1) Iisilingi zealuminiyam zisebenza ixesha elide, kwaye isilingi yealuminiyam ekumgangatho obalaseleyo inokusetyenziswa iminyaka engama-50;
(2) Isilingi ye-aluminiyam inobungqina obuhle bomlilo, ubungqina bokufuma kunye nefuthe elichasayo;
(3) Isilingi yeAluminiyam kulula ukuyicoca;
(4) Isilingi ye-aluminium gusset inokwakheka okuhle kunye nomgangatho ophezulu, kwaye kulula ukwenza isitayile esidibeneyo kunye neethayile, igumbi lokuhlambela kunye neekhabhathi zasekhitshini.
Q]:Lithini izibuko lakho lokuthumela ngenqanawa:
A:Tian Port,Qingdao Port, China
[Q]:Ngaba unaso isitokhwe?
A: Ngaphandle kobuninzi obuncinci, ubukhulu becala asigcini isitokhwe eninzi.Sivelisa emva kokuba umthengi ebeke iodolo
[Q]: Ngaba unokuvelisa iimveliso ezilungiselelweyo njengemfuno yethu?OEM
A: Ewe, unokwenza ngokwemfuno yomthengi
Ngaphambili: Umzi-mveliso wePaneli yeAluminiyam yaNgaphandle yePaneli yeSilingi-i-OEM O Emilise umbhobho ongqukuva isilingi isilingi ibhafu ye-aluminiyam-iZhongming
Okulandelayo: Ukumiswa lula 63.5#intsimbi yefomwork enokuthenjwa kwikholamu yefomwork kunye nenkqubo yeformwork eludongeni
Isilingi ye-aluminiyam emise okwe-U
I-OEM O Emilise umbhobho ongqukuva isilingi aluminiyam baffle...
Uyilo lwePop lweAluminiyam Strip C-Baffle Metal Ceiling
Fashion Aluminiyam Vula Ceiling Ceiling Ukuhombisa g...
Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, Plastic Formwork For Column, I-Scaffolding Adjustable Screw Jack, Amacandelo e-Scaffolding eRinglock, Kwikstage Scaffolding Accessories,